Fifandraisana… mampisaraka | NewsMada
Ela tsy nifankahita? Na ela tsy nihinana… Niara-nitady izay hisakafoana ry zareo, sendra izay toeram-pihinanana maro mitady, na vitsy aza ny tafiditra ao. Nihinana àry, nanafatra sakafo, tsy niraharaha ny lany. Mby amin’ny hoe izay kaontiny eo dia vidiny. Tsy mety voky. Na mitady ho maty voky…
Misy fatra sy fetra ny zava-drehetra, indrindra ny fihinanana. Misy manomboka manilika ny lovia avy nihinanana, misaritaka, misolitika. Velona ny fanafarana kafe, na tsindrin-tsakafo na fandevonan-kanina hafa… Amin’izany, mandeha ny resaka, kabary eo am-pihinanana: tsy manaiky ho kofina na kenda.
Misy tsy mahatsiaro tena: iombonana ny toeram-pihinanana, na tsy ahoana aza ny hafa. Teo ny angano: tsy hoe tantara tsy marina fa loza. Nisy maromaro amin’ireo vitsy anisa nandrehi-tsigara, na tsy azo ifohana izany aza ny toerana iombonana. Loza, tsy hita izay anariana ny lavenon-tsigara.
Tsy fahalalam-pomba? Na efa fomba ratsin’ny sasany: atao tavin-davenon-tsigara ny lovia avy nihinanana, ny kopy nisotroan-kafe, na vera nisotroana ranomboankazo. Amin’izany, mandeha ihany ny fanafarana tsindrin-tsakafo: kafe, habobon-dronono… Nantsoina ny mpampandroso sakafo.
Teo, gaga ny tompon-trano: saika feno lavenon-tsigara avokoa na vera, na lovia, na kopy… Misolitika, misaritaka; eny, na hoe avy nihinanana aza. Nefa mbola misy manafatra kafe, ranomboankazo… Koa ny tavin-davenon-tsigara no nentin’ny tompon-trano hasiana kafe, ranomboankazo…
Velona ny fifamaliana. Tsotra ny navalin’ny tompon-trano: nasiana lavenon-tsigara ny vera sy kopy. Koa ny tavin-davenon-tsigara no hasiana kafe, ranombonkazo. Ahoana ny niafarany? Samia mieritreritra… Misy tsy mahatsiaro tena eo am-pihinanana, rehefa mahazo toerana amin’izany, rehefa mihinana…
Miseho etsy sy eroa ny fandikan-dalàna, ny tsy firaharahana ny hafa, ny fanjakazakana. Nony valina araka izany, na tsy ahoana noho izany: manangana vombona, mila ady, tsy manaiky ho diso… Eny, na hita izao aza ny fifandraisana fa mampisaraka noho ny tsy fahaiza-miaina, tsy fahaiza-mitondra… tena.